Saraakiil ka tirsan booliska oo musuq-maasuq lala xiriirinayo oo lagu xiray Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Saraakiil ka tirsan booliska oo musuq-maasuq lala xiriirinayo oo lagu xiray Muqdisho
Saraakiil ka tirsan booliska oo musuq-maasuq lala xiriirinayo oo lagu xiray Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Taliska Booliska Soomaaliyeed ayaa xaqiijiyay in xubno ka tirsan Booliska Soomaaliyeed lagu xiray Magaalada Muqdisho, ka dib markii lala xiriiriyay arrimo musuq maasuq.
Dhamme Sadiiq Aadan Cali, Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidankaasi ay lacago laaluush ahi gaadiidka kaga qaadayeen mid ka mid ah kontoroolada amniga gaadiidka lagu hubiyo ee ku yaala magaalada, xilli ay ka hawlgalayeen.
Afhayeenka oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Muqdisho ayaa iftiimiyay in falkaasi ay ku kaceen intii lagu guda jiray bishii Ramadan iyo bandowgii horaan lagu soo rogay Caasimadda, balse dib ka fashilmay.
“Intii lagu jiray bishii Ramadan iyo weliba bandowga, Ciidanka Booliska Soomaaliyeed iyo shacabkuba waxaa ay muujiyeen dhabar adeeg iyo biseyl dhanka ammaanka, oo wax looga qabanayay amniga.” Ayuu yiri Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Sadiiq Aadan Cali ayaa markale yiri “Waxaa jirtay xubno ka tirsan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo ka shaqeynayay bar kontorool oo ka mid ah barraha Magaalada Muqdisho ayaa ku kacay fal laaluush ah oo anshax-darro iyo sumcad dil ku ah qayimka iyo sharafta ciidanka.”
Afhayeenka ayaa tibaaxay in soo xirista ciidankaasi ay ka dambeysay, ka dib markii ay ashtako ka dhanka ah soo gaarsiiyeen shacabka, dabagal iyo baaritaan ka dibna lagu guuleystay in la soo xiro.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in askarta la horgayn doono sharciga, laguna qaadi doono falka gaysteen waxa ay uga degsan shuruucda dalka.
“Ashtako dadka shacabka ah noo soo gudbiyeen darteed, dabagal iyo baaritaan ka dib waxaan gacanta ku soo dhignay ciidankii falka noocaasa ku kacay, hadana way xiran yihiin, iyagoo eedeysanayaal ah, waxayna mari doonaan waxyaabaha shuruucda dalka ay ka qabaan falkaasi.” Ayuu yiri Dhamme Sadiiq oo aan sheegin tirada xubnahaasi.
Sadiiq Aadan Cali